Ukuhlehliswa Ngokuhle Nge-Spam Yokudlulisa? - Landela I-Guides of Semalt
Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi i-Google Analytics iwusizo kakhulu kubanikazi bewebhu njengoba inikeza ulwazi nolwazi mayelana nokuthi kwenzekani kuwebhusayithi yakho nokuthi uluphi uhlobo lomgwaqo olutholayo. I-Google Analytics isiza futhi ukuhlola inani le-hits, izinga lokunciphisa, kungakhathaliseki ukuthi i-traffic iyimvelo noma ayikho engavamile, futhi yiyiphi amakhasi edume kakhulu futhi abukwa kakhulu kusayithi lakho. Kuyadabukisa kakhulu ukuthi ukudluliselwa kogaxekile kuye kwashaya i-Google Analytics ezinyangeni zamuva, okusho ukuthi imibiko yakho iyoba yinto engalungile futhi ingasizi ngalutho. Iningi lwakamuva, kutholakale inombolo enkulu ye-URL yokugaxekile eheha abantu ukushayela ithrafikhi.
Lapha, uJack Miller, Semalt iMenenja yeMpumelelo yeMakhasimende Ephezulu, unikeze imininingwane emfushane mayelana nendlela yokuqeda ugaxekile wokudlulisa uGoogle Analytics.
Ingabe imibiko yakho ithintekile?
Abantu abaningi badidekile mayelana nendlela yokuqonda ukuthi imibiko iyathinteka. Into yokuqala okudingeka uyiqaphele ukuthi ukuthi ungaphi imibono othola ngosuku. Uma ubona inani elibukekayo lokubukwa kunalindelekile, khona-ke kungaba yisibonakaliso sokuthi ugaxekile noma abaduni baye bawashaya isayithi lakho. Kufanele ungene ku-Google Analytics ukuhlola imininingwane yewebhusayithi yakho.
Indlela yokuvimbela ugaxekile lokudluliselwa?
Kuyiqiniso ukuthi i-Google Analytics izama konke okusemandleni ukuza okulindelwe kubanikazi bewebhu nakubani be-webmasters. Noma kunjalo, kunamathuba okuthi uzoshaywa ngokugaxekile okuthunyelwe. Ukuze uvimbele lokho, kufanele ufake ama-plugin afanelekile nesofthiwe, okukuvumela ukuthi ulahle umgwaqo okhohlisayo. Uma abaduni bezama ukuphazamisa amagama akho abasebenzisi namaphasiwedi, sekuyisikhathi sokushintsha imininingwane yakho yokungena ngaphambi kokuba sekwephuzile futhi ulahlekelwa ulwazi lwakho oluningi. Ngokuvamile, abaduni babasebenzisa ama-ID namakhodi wokulandelela okweba ukweba ulwazi lwakho lomuntu siqu. Ukuze uvimbele ukuhlaselwa kwabo, kufanele udale izihlungi ngenani elikhulu futhi ufake isofthiwe efanele ukuze i-ID yakho yokulandelela ingabanjwanga. Akunakwenzeka ukuba umuntu asuse i-Google Analytics ogaxekile wonke, kodwa ungakha izingxenye ukufihla imininingwane yakho bese wenza ezinye izihlungi ukuhlala uphephile kwi-intanethi.
Ukususa ugaxekile wokudluliselwa kusuka kudatha yakho yomlando
Yisikhathi sokususa ugaxekile wokudluliselwa kusuka kudatha yakho yomlando. Ngalokhu, kufanele udale izingxenye ezihlukene zamakhasi ahlukene. Futhi-ke, akufanele ukhohlwe ukusekela amafayela akho kanye ngesonto. Kuyadingeka ukushintsha iphasiwedi yakho kabili ngesonto futhi ukhumbule ukusebenzisa amaphasiwedi aqinile ukuze abaduni bangakwazi ukuqagela kubo. Okokuqala, kufanele uhlunge ukufana kwegama lomsingeli bese udala izizinda eziyingqayizivele. Isinyathelo esilandelayo ukufaka izihlungi kumakhasi amaningi ngangokunokwenzeka.
Hlanganisa i-bots eyaziwa
Kubalulekile ukukhipha ibhulozi eyaziwayo ngoba bangakwazi ukuthelela isayithi lakho kungakapheli amaminithi. Amanye ama-bots ukuthi i-Google Analytics iyazi mayelana nayo ingahlungwa futhi isuswe kalula. Ngenxa yalokhu, kufanele uhambe kusigaba somlawuli futhi ushintshe izilungiselelo. Uma ulandela zonke lezi zinyathelo, ungagcina iwebhusayithi yakho ivikelekile ku-Google Analytics ukudluliselwa kogaxekile kakhulu.